Sida loo soo ceshano tirtiray Pictures ka Micro SD Card
> Resource > Ladnaansho > Sida loo soo ceshano tirtiray Pictures ka Micro SD Card
Waxaan dib u soo ceshano karaa sawiro tirtiraa SD Card Micro ah?
Wiilkaygiiyow sawirada qaar ka mid ah tirtiray ka camera digital qalad ah. Waxay ahaayeen sawirada in kaarka SD Micro. Waxaan halkan weydiinaya sida inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka card SD Micro, sababtoo ah waxaan runtii u baahan tahay sawirada kuwa. Mahad badan.
Si aad u soo kabsado sawirada tirtiray ka card SD Micro, waxaad u baahan tahay in ay marka hore joojiyaan isticmaalka in kaarka SD Micro oo markaas hubiyo in aad kaarka SD Micro la xiran kartaa adiga oo computer iyo aqoonsaday warqad drive ah sida H sameeyo :.
Waxaad Google karaan barnaamijka sawir dhinac saddexaad ah oo hadda si ay kuu caawiyaan. Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa mid ka mid ah barnaamijyada soo kabashada ugu wanaagsan ee internet-ka oo aad dib u soo ceshano kartaa sawiro tirtiray ka card SD Micro effortlessly. Waa muhiim u ah labada Windows computer iyo Mac.
Download version tijaabo ah Wondershare Photo Recovery hadda. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad ku eegaan sawirada helay si aad ku hubin kartaa in barnaamijka waa xoog badan yahay ka hor inta soo kabashada.
Kabsado tirtiray Pictures ka Micro SD Card ee 3 Talaabooyinka
Haddaba u fuliyaan dib u soo kabashada la Wondershare Photo Recovery for Windows. Users Mac raaci karaan talaabooyin la mid ah la Mac version of Wondershare Photo Recovery aad.
Tallaabada 1 Connect kaarka SD Micro la your computer iyo ordi Wondershare Photo Recovery on your computer. Waxaad arki doontaa suuqa kala bilowday taas oo muujinaysa qalabka oo dhan oo ay taageerayaan ah. Guji "Start" in ay sii wadaan soo kabashada.
Tallaabada 2 Barnaamijku wuxuu muujin doonaa oo dhan drives adag in your computer, oo ay ku jiraan qoruhu maxalliga ah iyo qalabka lagu kaydiyo dibadda. Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ee kaarka SD Micro oo guji "Scan" in ay sii wadaan.
Fiiro gaar ah: Waxaad u qeexi karaan natiijada iskaanka ah adigoo gujinaya "Filter Options".
Tallaabada 3 Waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan helay sawiro sawirka kadib, sida aad ka arki kartaa image hoose.
Markaas halkan waxaan ku soo tallaabada final: doortaan sawirada aad rabto in la soo celiyo oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad u computer ama aaladaha kaydinta dibadda.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo sawirka soo celiyo dib ay goobta asalka ah mar kale inta ay socoto.
1 Marka laga reebo ka sawirada sanaanayaa ka card SD Micro, Wondershare Photo Recovery awood u kabsaday photos, Cajalado, iyo videos kombiyuutar, telefoonka gacanta, drive dibadda adag, USB flash drive, camera digital, iyo qalab badan oo lagu kaydiyo kale.
2 Haddii aad rabto in aad soo kabsado helay sawiro, aad u baahan tahay si aad u iibsato code liisanka. Version maxkamad Tani waxay kaa caawinaysaa in aad kaliya in baarista card SD Micro for photos tirtiray.
Memory Card Recovery inuu ka soo kabsado Faylal ay u Windows & Mac
Si kasta oo ay u soo kabtaan tirtiray Pictures ka Cell Phone BlackBerry
Kaabta iyo Soo Celinta Motorola Moto X fudayd
Pentax Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Camera Pentax
Lenovo Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop Lenovo